Lionel Messi oo ku garaacay abaal marin qaali ah kadib codeyn la sameeyay xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Pele – Gool FM
Lionel Messi oo ku garaacay abaal marin qaali ah kadib codeyn la sameeyay xidigaha Cristiano Ronaldo iyo Pele
Dajiye July 22, 2018
(Yurub) 22 Luulyo 2018. Xidiga kooxda Barcelona iyo xulka qaranka Argantina ee Lionel Messi ayaa helay codadka ugu badan, kadib codeyn uu sameeyay “Sport Pépèle” si loo ogaado xidiga ugu fiican taariikda kubada cagta aduunka.
Tirakoobkan uu ku sameeyay “Sport Pépèle” bartiisa rasmiga ah ee Twitter-ka ayaa waxaa ka qeyb galay 26,104 qof, Messi ayaana helay 44% codadkii la bixiyay, wuxuuna kaga sara maray Cristiano Ronaldo iyo Pele.
Cristiano Ronaldo oo si joogta ah kula soo dagaalamay mudada 10-kii sano ee lasoo dhaafay nooc kasta ee abaal marino mid guud iyo mid gaarba ayaa codeyntan kasoo galay kaalinta labaad, kadib markii uu helay 36% codadkii la bixiyay.
Halka halyayga reer Brazil ee Pele uu codeyntan ka galay booska 3-aad kadib markii dadkii ka qeyb galay codeyntan uu ka helay codad dhan 15%, sidoo kale Diego Armando Maradona ayaa isna buuxiyay booska kaalinta 4-aad.
Lionel Messi ayaa loo arkaa inuu yahay ciyaaryahankii ugu fiicnaa ee taariikhda ka dib markii uu noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee ku guuleysta Ballon d’Or 5 jeer sannadkii 2015,
Sidoo kale wuxuu Barcelona ku hogaamiyay afar jeer ee ah Champions League 2006, 2009, 2011 iyo 2015, iyo sidoo kale tartamada gudaha dalka Spain mudada 10-kii sano ee lasoo dhaafay.
Massimiliano Allegri oo ku dhawaaqay xidigaha uu ula safri doono dalka Mareykanka iyo Cristiano Ronaldo.....
RASMI: Mesut Ozil oo ku dhawaaqay inuu ka fariistay ciyaaraha caalamiga